भाई विदेशमा बुहारीलाई जेठाजूको म्यासेजमा राखेको यो प्रस्ताव देखाउंदा दाइ बोल्ने सकेनन्.. - Kohalpur Trends
भाई विदेशमा बुहारीलाई जेठाजूको म्यासेजमा राखेको यो प्रस्ताव देखाउंदा दाइ बोल्ने सकेनन्..
काठमाडौ । कुनचाहिँ दम्पतीले आफ्नो सुख, सम्पत्ति र वैवाहिक जीवनको समृद्धि एवं सुदृढताको कामना गर्दैनन् ? आफ्नो मनोकामनाको सफलताका लागि सबै चिन्तित पनि हुन्छन्। जब श्रीमान्-श्रीमतीले आफ्नो व्यावहारिक विचारधारालाई एक-आपसमा आदान-प्रदान गरेर सफलता प्राप्त गर्छन्। एक-अर्कामा सद्भाव र सद्व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ। जसले गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुनुका साथै सुख-शान्ति पनि मिल्छ।
उमेर जसरी बढ्दै जान्छ, जिम्मेवारीको बोझ पनि त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। एक-अर्कामा विश्वास गर्ने दम्पतीले जस्तोसुकै बोझ पनि सहजै सामना गर्न सक्छन् जसले गर्दा उनीहरूले कहिल्यै एक्लोपन महसुस गर्न पाउँदैनन्। कुनै पनि कामकारबाही गर्दा तेरो-मेरो नभनी आपसी समझदारीमा गर्नु राम्रो हुन्छ। जसले गर्दा श्रीमान्-श्रीमतीबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्नसक्छ। सानोतिनो मतभेदलाई सामान्य सम्झनुपर्छ, कहिल्यै घमन्ड गर्नुहुँदैन। यसका साथै श्रीमान्-श्रीमतीबीचको कुरा तेस्रो व्यक्तिलाई सुनाउन र सुन्न दिनुहुँदैन, त्यसले घरमा सधैं झ’गडा पर्नसक्छ।
एक-अर्कामा धाक-रवाफ देखाउनुहुँदैन। एक-अर्कालाई मन नपर्ने कुरा बारम्बार गर्नुहुँदैन। नयाँ काम गर्नु छ भने जहिले पनि सोचेर आपसमा सरसल्लाह गरी गर्नुपर्छ। यदि दुईमध्ये कसैलाई रि’स उठ्यो वा आवेगमा छ भने अर्कोले यथासम्भव मौन रहनुपर्छ। रिस विस्तारै कम हुँदै गएपछि शान्त वातावरणमा धैर्यका साथ समझदारीपूर्वक कुरा गर्नुपर्छ। दाम्पत्य जीवनमा स्थायित्व वा सुख-समृद्धिका लागि आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धको पनि ख्याल गर्नुपर्छ अन्यथा, व्यर्थमा अशान्ति, क्रोध एवं विद्रोह उत्पन्न हुन्छ।
शरीरमा त’नाव भए धेरै रि’स उ’ठ्ने, नचाहिँदो आरोप लगाउन मन लाग्ने, अरूको कुरा गर्न मन लाग्छ। यसका साथै गलत कुरा सोच्न पनि मन लाग्ने हुन्छ। यी सबै म’स्ति’ष्कमा त’नाव उ’त्पन्न भएपछि हुन्छ। एक-अर्कामा हार्नु, पराजय स्वीकार गर्नु नै दाम्पत्य जीवनमा सफलता पाउनु हो। जसले गर्दा वैवाहिक जीवनमा सधैं शान्त र सुखमय रहन्छ।
आज प्रायः श्रीमान्-श्रीमती दुवै जागिरे र व्यस्त छन्। जसले गर्दा उनीहरू कमै मात्रामा सँगै समय बिताउन पाउँछन्। एक-अर्कामा विश्वास छ भने उनीहरूले फुर्सदको समय रमाइलोमै बिताउँछन्।
हिन्दू समाजमा प्रायः पुरुष महिलामाथि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छन्। श्रीमतीले जागिरका अतिरिक्त घरको सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसले गर्दा पनि विश्वासको भावना कुण्ठित हुन्छ। श्रीमान्-श्रीमतीबीच रोमान्स, खुलापन, आनन्द र मीठा-मीठा कुरा गर्न मन लाग्दैन। यसमा श्रीमान्-श्रीमती दुवैको कमजोरीको फाइदा तेस्रो व्यक्तिले लिन सक्छ। श्रीमान्को अगाडि बोल्न नसक्नु, श्रीमान्को पद वा जागिरको घ’मन्ड गर्नु, श्रीमान्लाई मनले जित्न नसक्नु आदि पनि श्रीमती सधैं पिछडिने कारण हुन्।
हामीले यो माथिको भूमिका किन राखेका छौ भने यदि तपाईले पढ्नु भयो भने श्रीमान र श्रीमतीको सम्बन्ध कसरि समधुर बनाउने तिर पक्कै लाग्नु हुने छ र तपाईलाइ यसले पक्कै केहि न्याए गर्ने छ । अब हामीले माथि टाइटलमा राखेको समाचारको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गैरहेका छौ । जुन घटना सार्वजनिक भएपछि अहिले सामाजिक संजाल तातेको छ ।
भाई वैदेशिक रोजगारीका लागि दुवईमा थिए । घरमा वुहारी एक्लै थिइन् । यहि मौकामा जेठाजु नाता पर्ने छिमेकी दाईले बुहारीलाई लेखेको म्यासेज सार्वजनिक भएपछि सबैको होस उडेको छ ।
Previous Previous post: नेप्से परिसूचक २९ अंकले घट्याे, कसले कमाए, कसले गुमाए ?
Next Next post: दुवाकोटमा निर्माणाधीन वीर अस्पताल भवनको अवलोकनमा अर्थमन्त्री